Haweeney afkeedu furmay soddon sano uu xirnaa kaddib! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Haweeney afkeedu furmay soddon sano uu xirnaa kaddib!
Haweeney afkeedu furmay soddon sano uu xirnaa kaddib!
Haweeney soddon sano kaddib afkeedu furmay
New Delhi (Halqaran.com) – Haweeneydaan oo soddon jir ah ayaa afkeedu furmay markii ugu horreysay taniyo dhalashadeedii kaddib markii qaliin loogu sameeyay Isbitaal ku yaala caasimadda India ee New Delhi.
Astha Mongia marna uma aysan suura galin inay afkeeda kala furto arrimo la xiriira xaalad dhif ah oo isku keentay lafaha daankeeda. In yar oo xitaa carrabkeeda aysan taaban Karin ayaa u furneyd.
“Soddonkii sano ee la soo dhaafay Astha ma aysan awoodin inay qaadato cunno adag. Waxaa dhib ku ahaa hadalka, ilkaheeda ayay wada weyday.” Sidaa qoraal ka soo baxay Isbitaalka ayaa lagu yiri.
Dhakhaatiirta ayaa sheegay inay xaaladdaan ahayd mid adag. Iyagoo xusay inay isbitaalo kala duwan ay horey u diideen in ay qaliin ku sameeyaan.
“Waa mucjiso inaan afkeyga kala furi karo, sidoo kale aan wax ku cuni karo kuna hadli karo dhib la’aan.” Sidaa waxaa tiri Astha.
haweeney soddon sano afkeedu xirnaa oo furmay